MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA EEYAHA DHALINTA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada eeyaha Dhalinta
Chihuahua / Pekingese Isku Darka Eyda Cunnada
'Kani waa Tinker Bell. Waxay isku dhex jirtaa Pekingese (hooyadeed) iyo Chihuahua (aabeheed). Gabadhayda iyo anigu waxaan ugu yeedhnaa noo Peke-huahua. Waxay tahay 4 bilood jir sawirkan waana mid aad u daacad ah, caqli badan oo naxariis badan. Iyadu waa eey aad u ciyaareysa oo sifiican ula shaqeysa carruurta haddii ay bilawdo inay si aad ah u qallafsanaato waxa kaliya oo aan dhihi karaa waa Tink oo intaas ayaa ku filan oo way joojin doontaa. Way jeceshahay tagista nala socda waxayna yeelataa jimicsi fara badan. Iyadu waa eey aad u wanaagsan gebi ahaanba. Weligay ma jeclaan xayawaan kale sida aan u sameeyo Tinker Bell.
Dhabannada ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Pekingese . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Dhabannada
Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Kaynta = Neefta
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Pekachi
Diiwaangeliyaha Taranka Naqshadeeye = Dhabannada
'Mootada waa labo sano jir Pekachi. Wuxuu ahaa eey badbaadiya oo aan korsaday markuu lix bilood jiray. Mooto bajaajle waa ciyaar badan yahay oo aad u caqli badan. Wuxuu leeyahay saaxiibo badan, eeyo iyo dadba. Ma uusan helin toy jilicsan oo uusan jecleyn. Markuu eey ahaa wuxuu isku xoqin jiray ilaa uu ka seexdo ka dibna wuu isku toosi jiray isagoo cabaadaya. Aad ayuu u jilicsan yahay lugaha laakiin taasi waligeed kama hor istaagin socod dheer maalin kasta ama uu la tartamayo ardaaga saaxiibadiisa. Waan jecel nahay wadnaha Mootada mootooyinka lugaha hore ku sameeya! Scooter lama dhex galin bulshada markii aan korsaday. Waxaan u keenay Ahimsa taariikhaha ciyaarta sabtida eeyaha yaryar (waxaa jira tababaraha taariikh kasta oo ciyaar ah, taas oo runtii ka caawisay barashada Scooter-ka inay is dhexgalaan) ka dib qiyaastii seddex isbuuc oo Mooto Bajaajle sidaa darteed waxaan ka baqayaa wax walba iyo qof walba eeyaha oo dhan, Scooter wuxuu go'aansaday in lagu ciyaaro dhammaan eeyaha oo kaliya laga yaabo inay xiiso badan tahay Waxaan wali u aadnaa inaan ciyaarno taariikho Sabti kasta Scooter-na wuxuu hadda yahay Safiirka si aan u salaamo dhammaan waxyaabaha cusub ee imanaya. Waa gacaltooyo hubaal! '
Kani waa Punkie. Iyadu waa Pekingese / Chihuahua (Cheeks).
Tani waa Bubba the Cheeks at 6 bilood jir. Mulkiilihiisu wuxuu leeyahay, Isagu waa Xiddigga guriga, had iyo jeer wuxuu nagu hayaa madadaalo. Isagu waa mid aad u macaan oo ciyaar badan. Aad ayaan u jecel nahay isaga.
Bubba Jeegaha markay 6 bilood jiraan
Franklin the Cheeks waxay isku daraan ey yar markay jiraan 20 toddobaad— 'Franklin waa wiil macaan. Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro, waana mid ku fiican dadka iyo carruurta. '
Dagny the Cheeks at 1½ sano jir oo ku labisan shaati casaan cad
Ilmaha yar ee Beau Cheeks-ka oo 10 toddobaad jira — aabihiisna waa cadaan Chihuahua hooyadiisna waa cows Pekingese .
Brandy Doggie Dog wuxuu noolaa ilaa 15½ sano jir. Waxay dhimatay bishii May ee 2003.
Ilmaha guriga, Trooper Victor Duverge oo jira 7 bilood. Isagu waa isku darka Pekingese / Chihuahua.
Cuteygan yar ayaa lagu magacaabaa Lizzy. Lizzy waa 6-bilood, 7-lb. Isku darka Chihuahua / Pekingese. Iyadu waxay leedahay xoog badan oo aad u jecel. Waxay tagtay xanaanada caruurta ee xanaanada waxayna 'fadhiisan doontaa,' gariiri doontaa 'oo' hoos udhigi doontaa 'amarka (haddii ay niyadeed wanaagsan tahay). Dhegeheeda waxay leeyihiin maskax iyaga u gaar ah. Si toos ah ayey u istaagi doonaan (Chihuahua) toddobaad ama wixii ka dambeeya, ka dib way u foorari doonaan, sida sawirka, usbuuca soo socda. Wax kasta oo iyada ku saabsan si quruxsan ayey sidaas u tahay. Xaqiiqdii waxay leedahay maskax iyada u gaar ah.
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Dhabannada
Sawirrada Dhabannada 1
intee le'eg ayay helayaan eeyaha eskimo american ah
sawirka shilinta ee calalka eeyaha
papillon SUNTZU shih qas muqisho for sale
iskudhafka farantiiska bulldog faransiiska
fidsan dahaarka retriever adhijirro australia isku dhafan